10 Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 07/08/2021)
Ezumike ezumike ezinụlọ na Europe nwere ike ịmasị ndị nne na nna na ụmụaka nke afọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị hazie ya nke ọma. Europe bu ala ulo uku na akwa mmiri, ogige ntụrụndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma debe ebe ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke nwere ike ịme ka ha bụ ụmụ eze na ndị isi maka otu ụbọchị. Enwere nnukwu ụzọ ụkwụ na ọtụtụ ntụpọ maka ihe nkiri na nnukwu n'èzí, ma iso ụmụaka eme njem bụ ihe ịma aka.
Site na ịhazi ngwugwu, anyị emebewo onye ndu kachasị maka njem ezinụlọ na-arọ nrọ. Naanị soro nke anyị 10 ndụmọdụ kacha mma maka ezumike ezinụlọ na Europe iji hụ na njem njem dị egwu.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala ụgbọ oloko Tiketi Na .wa.
1. Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe: Mee Ka Kidsmụ Gị Soro
Ihe nzuzo na ezumike ezinụlọ buru ibu bụ mgbe ezinụlọ niile nọ n'ụgbọ ma nwee ọ excitedụ. Europe jupụtara na akara ngosi dị ịtụnanya, nkiri, ogige ntụrụndụ, na ebe nleta, na inwe ụmụ gị na-ekere òkè na-eme atụmatụ njem gị na Europe ga-aghọ a nrọ ezumike. Mee nyocha gị tupu oge eruo, họrọ ebe nlegharị anya ịchọrọ ịga, na ntụpọ ụmụ gị ga-ahụ n'anya, ma mgbe ahụ ka ụmụaka bulie 3-4 ebe nkiri na ndepụta. Wayzọ a na onye ọ bụla nwere obi ụtọ ma nwee ihe ọ na-ele anya kwa ụbọchị.
2. Nọrọ na AirBnB
Airbnb dị ọnụ ala, nwekwuo onwe, ma nwekwaa mmetụta nke ụlọ, nke dị ezigbo mkpa maka ụmụaka mgbe ha nọrọ n’ụlọ. Airbnb bụ oké ulo nhọrọ maka ezinụlọ ezumike na Europe n'ihi hotels na Europe na-mara mma dị oké ọnụ, ọbụna na azụmahịa nri ụtụtụ. Nọ na Airbnb na-enye gị kichin iji sie nri gị, nri ehihie-na-aga, na oge nri ụtụtụ mgbe ị ga-atụle ụbọchị.
Ọzọkwa, enwere ohere na nzuzo maka ụmụaka na nne na nna, izu ike mgbe ogologo ụbọchị ịgagharị.
3. Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe: Si na Ọrụ Obodo Center
Europe jupụtara na sinik agwa reserves na mba ogige, nwere nnukwu ụzọ ụkwụ dị egwu na ntụpọ picnic. Ebube okike na Europe bu otutu ihe obula ma oburu na gi na umuaka, ị ka nwere ike inyocha nsụda mmiri na ele ihe anya.
Enwere ike ịnweta ọtụtụ ogige ntụrụndụ via ụgbọ okporo site na obodo ukwu. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ tupu oge eruo ma bịa na njikere, ọ dịghị ihe kpatara na ị gaghị ekpori ndụ n’èzí ma nwee ọ airụ na ikuku ọhụrụ, ọhịa, na ogige ntụrụndụ.
4. Akwụkwọ Transportgbọ njem gị
Knowingmara ụzọ ị ga - esi ga - esi gaa mba ọzọ dị oke mkpa mgbe gị na ụmụaka na - eme njem. Chọghi efufu ma jegharia n’obodo jiri ụkwụ ma ọ bụ si n’ọdụ ụgbọ elu na-eme njem, n'agbanyeghị ihu igwe. Ya mere, atụmatụ na ntinye akwụkwọ gị n'aka nke iga na Europe ga-ekwe nkwa a oké ezinụlọ ezumike.
Transportationgbọ njem ọha na eze bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu na ntụsara ahụ na Europe. Enwere ọtụtụ nhọrọ njem na ime obodo. Inweta gburugburu ụgbọ okporo ígwè na tram dị mma na ụmụaka n'ihi na ị nwere ike iru ebe niile, zere okporo ụzọ na mmefu ego nke njem gị.
Tụnyere ya ịgbaziri ụgwọ ụgbọ ala na itinye oge dị ukwuu na-achọ ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ na-elekwasị anya n'okporo ụzọ, ị pụrụ ịnụ ụtọ na-agba ịnyịnya na nri, mgbe a ụgbọ okporo ígwè na-ejegharị ejegharị na ụmụaka na Europe. Nnukwu uru nke njem na Europe na ụmụaka ụgbọ okporo ígwè bụ na ụmụaka njem free na a Euro okporo ígwè ngafe.
5. Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe: Pack Light
ejegharị ejegharị na ’Sgbọ okporo ígwè Europe na strol na nnukwu akpa akwa nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Stationsfọdụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè agaghị enwe igwe mbuli elu ma ọ bụ mbuli elu, ya mere, ọ kacha mma ịkwakọ ma gaa njem. Jide n'aka na ị na-ebu ihe eji agba ọsọ na ndị na-ebu ibu, otú a ma ọ bụrụ na ụmụaka etoola, ha nwere ike ibu akpa nke ha.
E wezụga, mbukota oku putara ichikota ihe nile di nkpa maka njem ezin’ulo. N'ihi ya, na-eme ka ụmụaka na-arụsi ọrụ ike n'ụgbọ okporo ígwè na-agba agba, akwụkwọ ọdịyo, ma ọ bụ katuunu na-ekiri oge na iPad, ga-abụ ezigbo enyemaka.
Munich na Passau Zụọ Ahịa Ahịa
Nuremberg na Passau Zụọ Ahịa
Salzburg na Passau Zụọ Ahịa
6. Iso Kidsmụaka Na-erikọ nri Na Europe
I kwesịrị ịma na ụlọ nri na Europe anaghị enye ụmụaka nri, ya mere o jiri bụrụ ndị okenye’ òkè maka onye ọ bụla. Nke a dị mkpa karịsịa ịkọwapụta ma ọ bụrụ na ị na-aga travelingtali, ị gaghị ahụ nri pizza ma ọ bụ pasta nke ụmụaka, ya mere jikere.
ma, ịkwesighi iri nri. Otu n'ime anyị kacha mma Atụmatụ maka njem na ụmụaka na Europe na-enwe ezinụlọ picnics. Ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ogige ntụrụndụ Europe na okike n'ihi na ala ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adị mfe ịhazi ezumike ezinụlọ gị. Nara achịcha dị iche iche, nkpuru ohuru, na akwụkwọ nri na ahịa dị na mpaghara ma ị dịla njikere maka picnic nri ehihie. Ọnụahịa ndị dị na ahịa ndị ọrụ ugbo dị ọnụ ala karịa na nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ nri. Iji bulie ya elu, naanị chee echiche banyere echiche ị ga-enwe na ọ bụla ọnụọgụ na kpam kpam n'efu.
7. Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe: Atgbọ mmiri na njem njegharị na Europe
Nwere ike iji aka maapụ na akwụkwọ na ngwa mee ya niile n'onwe gị, mana isonye n’ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịgagharị njem kachasị mma. N'ọtụtụ obodo ndị dị na Europe, e nwere free obodo ije njegharị na onye ndu obodo. Ntuziaka a na-eji obi ụtọ ga-egosi ma gwa nzuzo nzuzo nke obodo ahụ, na-enweghị ị na-efu n'okporo ámá 'maze. Onye ndu ahụ ga-egosikwa ụlọ oriri na ọ localụ localụ ndị dị na mpaghara nri nri ehihie ma nye ndụmọdụ kachasị mma banyere ihe a ga-eme n'obodo ahụ.
Ọwa mmiri na osimiri jupụtara na Europe, otú a njem ụgbọ mmiri bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ na ụzọ pụrụ iche iji gaa ma chọpụta. Ọ ga-abụ ma ihe na-atọ ụtọ maka ụmụaka na izu ike maka gị.
Interlaken ka Zurich Zụọ Ahịa
Lucerne ka Zurich Zụọ Ahịa
Bern ka Zurich Zụọ Ahịa
Geneva na Zurich Zụọ Ahịa
8. Wepụta oge maka ịnyịnya Carousel
Ọtụtụ obodo Europe ga -enwe carousel na -egbuke egbuke na ọmarịcha isi obodo. Kama ịgbaga na saịtị ọzọ, Kwụsị, ma kwe ka kiddos na-aga dị ka ọtụtụ ịnyịnya ka ha chọrọ. Na-ekpori ndụ ịnyịnya carousel mgbe Eiffel Tower dị n'azụ gị, bu oge echefu echefu diri umuaka na ndi okenye.
9. Atụmatụ maka Ezumike Ezinụlọ Na Europe: Wepụta Oge Maka “Oops”
Naanị n'ihi na ịnọ na Switzerland, anaghị ekwe nkwa ido ihe niile ga-aga were were na njem ezinụlọ gị. Mgbe gi na umuaka na-ejeghari, ihe ọ bụla nwere ike ime, ọbụna na Europe, so be sure to leave time for oops on the trip. Make time for unplanned surprises, igbu oge, mgbanwe na atụmatụ ekele grumpy kiddos, ma nọrọ ma dị njikere ịgbanwe.
10. Gosi Kidsmụaka Europe Gbanyụrụ Beatzọ Na-ada
Otu n'ime ndụmọdụ anyị kachasị maka njem na ụmụaka na-egosi ha otu esi eme njem pụọ n'okporo ụzọ a kụrụ akụ na Europe. Zere ọha mmadụ na isi n'ámá, ahịrị maka gelato, na foto ezinụlọ, site na ịkpọrọ ha gaa ebe ndị ahụ zoro ezo, ime obodo, na ọdịdị pụrụ iche.
Lovemụaka hụrụ akụkọ ifo na akụkọ ntụrụndụ n'anya, ya mere were ha gaa ebe ndia a na-akọ akụkọ ifo. Ọ bụ ụzọ dị mma iji soro oge nọrọkọ ọnụ, -eme ka ndị kasị mma nke ezinụlọ ezumike na Europe, ma kụziere ha banyere ọdịbendị bara ụba na akụkọ ntolite nke Europe.
Europe bụ nnukwu ezumike ezumike ezinụlọ n'oge ọ bụla n'afọ. Ma ị bụ ezinụlọ na-achọ njem ma ọ bụ nwee mmasị ilegharị anya na ebe ngosi ihe mgbe ochie, Europe enweela ya niile. Na mgbakwunye, Europe bụ ezinụlọ-enyi na enyi mgbe ọ na-abịa na njem na pụrụ iche obodo gafere. Anyị 10 ndụmọdụ kacha mma maka ezumike ezinụlọ na Europe ga-abụ ezigbo enyemaka mgbe ị na-eme atụmatụ njem njem gị ọzọ ma ọ bụ ọbụlagodi ala nke ụlọ na akụkọ mgbe ochie.
Milan na Venice Zụọ Ahịa
Padua na Venice na-azụ Ahịa
Bologna na Venice Zụọ Ahịa
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka atụmatụ a kacha mma ezinụlọ ezumike na Europe ụgbọ okporo.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Tips For Family Ezumike Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-family-vacation-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Okechukwu Uduak Ezinaụlọ ezinụlọ Ụgbọ njem ezinụlọ familyvacation traintravelwithkids
Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe